Daawo- Sawirro:- Gudoomiye Yariisow oo bilaabay dib u howl-gelinta Nalalkii Soollarka Cadceedda ee Muqdisho – Kismaayo24 News Agency
Daawo- Sawirro:- Gudoomiye Yariisow oo bilaabay dib u howl-gelinta Nalalkii Soollarka Cadceedda ee Muqdisho
by Ahmed sudani 13th March 2018 044
Dowladda hoose ee Xamar ayaa bilowday dib u howl-gelinta Nalalka ku shaqeeya ileyska Cadceedda ee Soollarka loo yaqaan, kuwaasoo qaarkood ay ku yimaadeen cillado kala duwan.
Howlaha dib loogu soo celinayo Nalalkan oo haatanba laga hirgeliyay inta u dhexeysa xarunta Xero Gaadiid iyo Taallada Xaawo taako, ayaa waxaa Xalay kormeer ku tagay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada muqdisho, C/raxmaan Cumar Cusmaan iyo ku xigeenkiisa dhanka amniga iyo siyaasadda Maxamed C/laahi Maxamed (Tuulax) iyagoo shaqaalaha ku ammaanay howsha ay shacabka u hayaan.
Guddoomiye Tuulax oo goobta ka hadlay ayaa ku bogaadiyay farsamayaqaanada Dowladda hoose sida howl karnimada iyo waddaniyadda leh ee ay ugu qayb qaadanayaan dib usoo celinta Iftiinka iyo bilicda waddooyinka Caasimadda Dalka ee Muqdisho.
Tuulax ayaa ayaa sidoo kale Shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ka shaqeeya Gobolka Banaadir ka codsaday inay Nalal ku xiraan goobaha ayan Soollarradu gaarin ee caasimadda Dalka, si loo helo Magaalo ka siman Iftiinka iyo bilicda.
AKHRISO: Baarlamaanka Somaliland oo Meel cidlo ah ka soo qaaday Go’aankii Golaha Shacabku ku mamnuuceen DP World
SAWIRRO:- Madaxweynaha Galmudug oo kulan la qaatay Guddiga Mideynta Galmudug iyo Ahlu-sunna oo shir uga Socdo dhuusamareeb
War Dag Dag Ah:Argagixisada Al Shabaab Oo Magaalada Buurdhuubo Sadex Nin Dil Ku Xukumay
admin 30th March 2013 28th August 2015
Qiso Cajiib Ah Oo Aay Ka Sheekeyneyso Gabadhii Aay Ku Dhacday Iyo Waxey Nolosha Kala Kulantay..!!
admin 30th May 2014 28th August 2015
Top News: Kenya oo sara u qaadey Amaankeeda Iyadoo la filayo in uu Obama Yimaado, waxaa ay……